Ahoana no ahafahako manala ny sakaizako amin'ny zanako?
Ny fanaraha-maso dia manampy amin'ny fananganana tsikelikely
Boky ho fitaovana
Pikomin'ny Paska, Santa Claus ary ny feon'ny pasitera
Ny zazakely sy ny zaza dia tsy hay hadino loatra raha tsy misy sakaiza, satria izy ireo dia mihoatra ny fitaovana ankafiziny indrindra ary faly ny ray aman-dreny rehefa teraka indraindray ny zaza. Na izany aza, maro ny ray aman-dreny no mahatsapa ho tsy azo antoka rehefa miatrika ny fotoana tsara indrindra hanesorana ny sakafony.
Torohevitra mba hisintonana
Milaza ny manam-pahaizana sasany fa tokony hangatsiaka ny zaza raha vao vita ny taona faharoa.
Ny anton'izany dia ny fampiasana tsy tapaka ny sakana iray dia loza mety hitranga ao amin'ny zaza ny fihenanan'ny nify na ny valanorano.
Na izany aza, ity fanambarana ankapobeny ity dia tsy azo ampiharina amin'ny ankizy tsirairay, satria ny fampivelarana ny ankizy dia mandroso amin'ny toe-javatra isan-karazany.
Ho an'ny ankamaroan'ny ankizy, dia ampiasaina amin'ny fanamafisana ny fanosorana. Indrindra fa amin'ny alina dia mila izany izy. Ny antony mahatonga ny fampiasana ny saka dia ny toetran'ilay zaza. Ny tebitebin'ny sodokoana dia mampahatsiahy ny sokatra amin'ny nono, izay zava-dehibe amin'ny fivoaran'ny zaza. Ny fampinonoan-tsakafo ankoatra ny sakafo dia manana fifaliana ihany koa.
Maro amin'ireo reny mampinono no hanamarina fa matetika no tony ny ankizy amin'ny alina noho ny fanomezana ny tratra. Ny labozia dia afaka manao asa mitovy amin'izany.
Raha tsy manolotra ny zaza ho sakaiza ianao, dia mety hitranga izany fa ny ankizy dia nisafidy ihany koa ny ankihibe fa tsy ilay sakana.
Na izany aza, raha mino ny hevitry ny manam-pahaizana, Noho izany dia manintona ny ankihibe, fa ny fanosorana azy kosa no tena tsara, Ny antony dia indray mandeha fa ny fanesorana amin'ny sifotra dia voaporofo fa efa nilaozan'ny hatsiaka teo amin'ny ankihibe.
Ny fihoaram-pahefana azo avy amin'ny nify, izay mety ho vokatry ny famoahana mandritra ny fotoana lava kokoa, dia matoky kokoa ny ankiben-tanana kokoa noho ilay sakana.
Ankoatr'izay, azonao atao ny mampihetsi-po kokoa ny fanomezam-pahasoavana azo antoka kokoa noho ny ankihibe izay ananan'ny ankizy foana. Na izany aza, ho an'ny ray aman-dreny marobe vaovao, mbola misy foana ny fanontaniana, ahoana no ahafahanao mamerina ny tsara indrindra amin'ny zanakao indray?
Ny alaheloko aloha dia ny fahazarana. Noho izany, aza avela ho lasa fampiasana maharitra hatrany am-piandohana izany, satria izany dia hahatonga azy ho mora kokoa amin'ny farany. Hatramin'ny voalohany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny mpanararaotra ianao amin'ny fotoana sasany toy ny rehefa matory na manome toky.
Ankoatr'izay, dia tsy tokony hamerina tampoka ny ankizy ilay sakaizan'ny iray tampoka. Na izany aza, tokony atao tsinontsinoavina ny fanidiana tsikelikely, satria ny fisintahana tanteraka dia mora kokoa. Ny ray aman-dreny dia tokony hampita amin'ny zaza ary hanamafy fa mety ho tsara ny ho tovovavy lehibe na ankizilahy lehibe ankehitriny ary tsy mila intsony ny fanosehana intsony.
Mba hahatonga azy ireo ho mora kokoa ny miala sasatra, afaka mampiasa fitaovana isan-karazany ianao. Azonao atao, ohatra, ny mahazo boky momba ny ankizy momba an'io lohahevitra io. Misy karazan-tsoratra maro be izay miresaka, ohatra, ny foto-pahaizana jadona, zandriny na tavoahangy.
Ankizy maro no manazava amin'ireo tantara ireo ary te hanova azy imbetsaka. Tsy mila famonoana intsony i Conny, ka matetika ianao no mampivelatra ny ilana ny miala amin'ny ilana fihinanam-bilona ary ny mitsonika dia mora kokoa.
Azon'ny ankizy atao ny mahatsapa fa mety hahatonga azy io ho mora kokoa ny mampiasa ny fonosana.
Fomba iray hafa ahafahan'ny ankizy mamela ny fialan-tsasatra amin'ilay siramamy dia ny mankalaza ny tsara indrindra, mba hahatonga azy ho lasa mazava amin'ny ankizy fa tapitra ny fizarana iray.
Toy ny fatiantoka amin'ny nify, afaka mampiasa ny fefy fanangonana ianao ho toy ny fanaraha-maso ny dingana mifanaraka amin'ny fivoahan'ny sifotra.
Ny fefy dia mifanakalo ilay sakana, izay napetraka eo ambany ondana, ho an'ny ankehitriny. Ny safidy iray hafa dia ny hampiditra ny Oza Pasitera na ny Ankizy Mitaona amin'ny famoahana ilay sakana. Ny pikônan'ny Pastey dia manakalo ny sifotra ho an'ny fanomezana mahafinaritra, toy ny fanangonana fefy.
Izay rehetra manana zaza hafa ao amin'ny faritry ny namana na fianakaviana, dia afaka mifanakalo hevitra momba ny famindrana ny sakana amin'ny tany hafa kely miaraka amin'ny zanany. Azonao hazavaina avy eo ny ankizy kely, ohatra, fa ny zaza kely dia mila maika kokoa ny sakaiza.
Satria ny ankizy dia te ho ambony kokoa sy ho traikefa bebe kokoa, dia matetika no mahomby tsara izany. Angamba koa miaraka amin'ny fehezan'ny pasitera na ny Paska Bunny / Christ Child, izay hanaja sy hatoky tanteraka izany rehetra izany. Zava-dehibe amin'ny toe-javatra rehetra izay manosika ny zanakao ho tsinontsinona.
Ny ankizy tsirairay dia manana paikady manokana. Aza mampijaly ny tenanao mba hampitahana azy, fa alaharo tsikelikely ny zanakao avy amin'ilay sakaiza. Tsara ny fitsaboana, tsy loza ho an'ny nify ankizy izany - na izany aza, isika rehetra dia tafavoaka velona tamin'ilay sakana.
Fikarakarana zaza am-bohoka sy nify zazakely
Fikarakarana zaza - mikarakara volo amin'ny zaza
Fikarakarana zaza - bodoin'ny zazakely
Fikarakarana zaza - tarehy ny zaza
Fikarakarana zaza - marika an-doha amin'ny zaza
Ny fiterahana | zazakely
Sarin'ny zazakely miteraka
Pejy fanolorana zazakely
Ravin-tranonkala reny sy zazakely
Pejy misy fanangonana an-kibon'ny ankizilahy